Daqsi hayn hayntuu ku dhintaa dadna dareen xumi.
Ilaa iyo Falkii Xumaa ee ka dhacay Dalka Maraykanka waxaa ka socda Aduunka Siyaasad xowli isku badalaysa oo Wadamo badan iyo Dad badan haday yeeshaan Astaamaha dadkii Falkaa Xun sameeyey galaafan doonta iyaga iyo wixii la hal maala.
Waxaanay Culimadu dhahaan haddii aadan Waqtiga la jaanqaadi karin wuu ku jabiyaa.
Dadkuna Waqtiga isbadalay ma wada dareeman ee waxaa dareema mutacalimiinta iyo Abwaanada oo u sheegan Siyaasiyiinta in Waqtigu isbadalay oo ay khasabtahay in Dadku loo sheego in ay la saanqaadan.
Siyaayaasiyiinta ayaa markaa Dadka u gudbiyaa Xalka ugu fiican ee looga samato bixi karo khatarta soo soctaa.
Haddaba Maanta Waqtigii waa isbadalay wuxuna ku socdaa xowli aadan waqti daawasho mooyee waqti fakir aadan haysaan.
Xiliga sidaas ah in Odayaal aqoontoodo gaabantahay iyo Siyaasiyiin Nin Quwaax hela iyo Nin Qadhoon hela hala qadhabsoda ku jiraan in ay Puntland xali ka keenaan ha ka sugina.
Sidaa darteed waxaan ku boorinyaa haddii ayba wax Caqliga wax ku gartaa jiraan waxaa loo batay Cune wax ku gartee in aaynu dadkeena Maanta ku boorino sidii ay Siyaasad mida ah sida ugu Dhakhsaha badan ula imaan lahaayeey, Mutacalimiiyta dabada joogaana isutaagaan sidii ay aduunka uga dhaadhicin lahaayeen in Dadkoodii is badalay.
Somaalidu waxay dhahaan Ninkaan Carab lahay bay Caydu qabataa oo isma difaaci karo, sidaa ay maantaa puntland tahay, arintuse maanta cay ka wayn.
Maanta Carab midaysan bay puntland u baahan tahay oo u taagan samato bixinta Dadka reer puntland.
Sidaa darteed nin kastaba ha u istaago sidii puntland dagaal sokeeye uga dhici lahay oo sahlaya in aanaan waqti u helin in aan wax qabano.
Iyo maamul midaysan oo aan astaamaha ninmankii falka xun sameeyeen lahay .